Nhau - Vibration mota isina mvura
Vibration mota isina mvura
Iyo yese yekuongorora maitiro eanotutisa mota ndeyekuongorora uye kuverenga izvo zvigadzirwa. Izvo zvinhu zveakasiyana magadzirirwo akapatsanurwa kuita epamusoro uye ezasi zvinhu. Iko kugona kwekuongorora kunofanirwa kuve kwakakwirira, iyo hama yekugadzirisa kugona inofanirwa kusangana nezvinodiwa, uye izvo zvinhu zvinogona zvakare kutakurwa. Pane zvikonzero zvakasiyana siyana zvekuvhenekwa kwezvinhu nekutenderera chinovhenekesa, kuitira kuti izvo zvinhu zvidiki pane mesh zvisakwanise kupfuura nepasefa yegomba rechidzitiro chinotetereka zvakanaka. Chikamu chidiki chete chezvinhu zvakanaka chinogona kuburitswa kuburikidza neseve gomba, nepo zvimwe zvinhu zvidiki pane gomba resefa zvakasanganiswa nezvinhu zvakakura kupfuura gomba reseve (kureva izvo zvinhu zviri pachiratidziri).
Yezve vibration mota yekuongorora michina, inoshanda yekuongorora nzvimbo, skrini chimiro, vibrating skrini chimiro, vibration frequency uye amplitude zvakare ndiwo makuru maitiro anokanganisa kuongorora kwekushanda kweiyo vibrating skrini; nekuda kwehukuru hwezvinhu, hunyoro (hunyoro zvemukati), kugoverwa kwemagirinara zvinhu uye hunyoro hwezvinhu, ndicho zvakare chikonzero chikuru icho chinobata zvakananga chiyero chekutarisa cheiyo chinozungunusa skrini. Izvo zvinhu zvine yakanaka hama fluidity, diki yemvura zvemukati, yakajairika chidimbu chimiro, yakatsetseka pamupendero uye isina micheto uye makona zviri nyore kupfuura kuburikidza nechiratidziri.
Kuti uvandudze kuongorora kweiyo mota inodedera, kune izvo zvakanaka zvinhu uye zvinhu zvakaoma kunongedza, iyo yakatenderera inozungunusa skrini inogona kugadzirisa kutenderera kutenderera kweiyo vibrator (shandura iyo inoyerera kutenderera kutenderera) kuwedzera nguva yekuonana pakati skrini yepamusoro uye izvo zvinhu, zvinoenderana neiyo yekuyera chiyero, asi iko kugona kwekugadzirisa kuchaderedzwa; iyo mitsara inoyerera inodedera inogona kudzora nenzira yakakodzera iyo yekudzika inodzora kona yeiyo vibrating skrini yepamusoro kana kuwedzera iyo Vibration inokomberedza angle inoshandiswa kudzora kumhanya kumhanya kwezvinhu uye kugadzirisa mwero wekutarisa; yezvinhu zviri nyore kuvhenekwa uye zvidimbu zvidiki, iyo yekudzika inodzora kona yekona pamusoro peiyo inozungunusa skrini inogona kuwedzerwa kana iyo vibration yekurerekera kona inogona kuderedzwa kuti ikurumidze kumberi kuyerera kwezvinhu, kuti ivandudze kugadziriswa chinzvimbo. Kana kuburitswa kweiyo linear vibrating skrini ichidikanwa kuti ive yepamusoro, uye iko kugona kwekutarisa uye kugona kubata kunofanira kusangana, hupamhi uye kureba kwechidzitiro chechidzitiro pamusoro chinogona kuwedzerwa.